Madaxweynaha dowlada Puntland oo Garoowe dib ugu soo noqday kadib markii uu kasoo qaybgalay shirka madasha qaran - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo Garoowe dib ugu soo noqday kadib markii uu kasoo qaybgalay shirka madasha qaran
September 15, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo Garoowe maanta oo Khamiis ah dib ugu soo noqday. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo wefdi uu hoggaaminayo oo ka qaybgalay shirka hoggaamiyaasha siyaasada Soomaalida ayaa maanta oo Khamiis ah dib ugu soo noqday caasimada Puntland ee Garoowe.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee kumeelgaarka ah ee Kanooko oo kuyaala duleedka Garoowe waxaa ku qaabilay guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Shiikh Cabdisalaam iyo masuuliyiin kamid ah golayaasha dowlada.
Madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada Garoowe ayaa sheegay in ay magaalada Muqdisho uga qaybgaleen shirkii madasha wadatashiga qaran, kaasoo looga hadlayey dhammaystirka hanaanka doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona bilaha soo socda.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa xusay in ujeedka ugu weyn ee shirku uu ahaa sidii loo fulin lahaa ama loo hirgelin lahaa qodobadii lagu heshiiyey ee dhabbaha loogu xaadhayey sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorashooyin ay dadka Soomaaliyeed kuwada qanacsanyihiin.
Ugu dambayn Cabdiweli ayaa shirkaas ku tilmaamay mid guul u ahaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey hirgelidda qodobadii kasoo baxay shirkaas.